Mara mma na incredibly ụtọ Georgia njikere reopen maka njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Mara mma na incredibly ụtọ Georgia njikere reopen maka njem
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Georgia • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Zurab Pololikashvili bụ odeakwụkwọ nke World Tourism Organisation (UNWTO), ọ bụkwa ya bụ onye nnọchi anya gọọmentị na Spain maka Georgia tupu a họpụta ya na ọkwa ya ugbu a.
UNWTO na-enwe nrụgide imeghe njem nlegharị anya, Pololikashvili na-eme atụmatụ nke a na July 1 na-ewelite mgbochi niile.
Ka ọ dị ugbu a, Georgia edeela ikpe 822 nke COVID-19, 13 nwụrụ, yana ikpe 119 ka na-arụ ọrụ, Nọmba a na-atọghata na 3 nwụrụ anwụ nde mmadụ, ihe dị ala site n'ọtụtụ ụkpụrụ.
Isi Njem, otu onye ọrụ njegharị na Georgia gwara ya eTurboNews: Anyị nwere obi ụtọ isoro gị zie ozi ọma: Georgia na-emesịa na-ebuli iche iche ma ndị otu anyị niile na-arụsi ọrụ ike iji zute ndị ọbịa anyị kachasị mma n'ọdịnihu dị nso!
'CAPITAL GEORGIA TRAVEL' na-arụsi ọrụ ike na-aga n'ihu: Ndị njikwa anyị mepụtara mmemme na njem ọhụụ, hazie arịrịọ ọhụrụ, zaghachi ajụjụ gị, ma lelee ị nabata gị niile nke ukwuu ile ọbịa, nke mara mma nke ukwuu na ụtọ Georgia!
Dabere na ozi kachasị ọhụrụ, a ga-emepe ala Georgia na 01.07 maka ndị njem nleta ụwa.
Georgia, obodo no na Europe na Asia, bu obodo ndi Soviet nke bu obodo Caucasus Mountain na oke osimiri Black Sea. Ọ bụ ama maka Vardzia, nnukwu ụlọ obibi ndị mọnk na-abanye na narị afọ nke iri na abụọ, yana mpaghara ochie na-eto mmanya mmanya Kakheti. Isi obodo, Tbilisi, bụ nke a ma ama maka owuwu dị iche iche na mazelike, n'okporo ámá cobblestone nke obodo ochie ya.